အင်ကြင်းသန့်: ဇွန် ၁၃မှာမွေးသောသူ
Posted by အင်ကြင်းသန့် at 12:05 AM
(ကိုတီ (TZA) ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးပါ။ မနက်ကတည်းက အောက်ကပိုစ့်လေးမှာ လာဆုတောင်းပေးသွားလို့ ဒီမှာ ပြောင်းသိမ်းလိုက်တာ....)
အင်ကြင်းရေ....ယနေ့မှစ နောင်နှစ်ပေါင်း ရာကျော်စိတ်၏ ချမ်းသာချင်း ကိုယ်၏ကျမ်းမာချင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးတယ်နော်။မိဘတွေအပေါ် ဆိုးခဲ့တာတွေကို ခုချိန်မှာ ပြန်ပြီးသိလို့ သတိလေးနဲ့ ပြင်ဆင်ပြီးနေနိုင်တဲ့အတွက် ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ။ သမ္မီးလိမ္မာလေးတစ်ယောက်အဖြစ် အမြဲတန်းနေသွားနိုင်ပါစေလို့..
ပထမဆုံး မွေးနေ့ဆုတောင်း သူ မဖြစ်တော့ ဘူးနော်
Happy Birthday ပါ ညီမရေ.. ချမ်းမြေ့ပါစေ
ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစု စုံစုံလင်လင် နဲ့ ချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းများ နဲ့ အတူ မွေးနေ့ပွဲလေး အမြန်ဆုံး ကျင်းပနိုင်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပေး ပါတယ်နော်
ညီမ မဆိုးပါဘူး လိမ္မာပါတယ်နော် .. အခုဆို ပိုတောင်လိမ္မာသေး
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ...း))
နာမည်ပြောင်းခေါ်တော့မယ်ကွာ... ဂျီဂျင်းလို့။ ဆိုးခဲ့တာတွေအတွက် ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး တစ်ချက်လောက် ရိုက်အုံးမှ။ လိမ္မာလာတဲ့အတွက်တော့ အာဘွားပေးမယ်။း)
အင်ကြင်းရေ... မထင်မှတ်ဘဲ မဇွန်နဲ့ညီမလေး ရက်ကပ်ပြီး တစ်လတည်းမွေးတာ၊ အီတလီအသင်း အားပေးတာချင်းတူတာ၊ အတွေးတွေ တော်တော်များများ တူတတ်တာတွေ သိရတော့ တကယ်ပဲ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
“...” နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် အသက်ရှင်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံ၍ ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်း မိဘကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ရသော၊ လောကီလောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာသောအကျိုးကို တတ်စွမ်းသ၍ သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်သော သမီးအလိမ္မာ အင်ကြင်းလေး ဖြစ်ပါစေလို့ မဇွန်ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။
“မိဘတွေကို တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်ခွင့် ရသောသူ” ဖြစ်ပါစေ ...
ဒေါ်ဂျီဂျင်း အဲလေ အင်ကြင်း
ချစ်သူခင်သူများနဲ့ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေစွာ အတူတူနေထိုင်ရပါစေ..
မချော ( www.missgreenlady.com)
lucky7ဆိုတိုင်းလည်းမလပ်ကီးတာတွေအများကြီးပါ..၁၃ကိုunlucky number ဆိုတိုင်းလည်းမမှန်ပါဘူး...ကျွန်မတော.၁၃ကိုမြတ်နိုးတယ်...ကျွန်မသမီးလေးကမတ်လ(၁၃)၇က်ဖွားလေ..''.Happy birthday ''ပါနော်...''may God bless you on your birthday and always''...
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့မှစတည်တိုင် မနက်ဖြန်များစွာမှာ စိတ်သွားတိုင်ကိုယ်ပါ၊ လိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ မအင်ဂျင်း :)
(Blog ရေးတာ နားထားရင်း မွေးနေ့ ပိုစ့်လေးကိုတွေ့လို့ လာမန့်သွား၏ )
အလို ...ဘကျောက်နဲ့ မီးဝင်မီးထွက်ပါလား...
အင်ကြင်းရေ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
မုန့်ဟင်းခါးပဲ ကျွေးပါ။ ကိတ်မုန့် မကြိုက်ဘူး။
၄ ဂဏန်း သမားက ထူးရင် ထူး မထူးရင် ရူးတာပဲတဲ့။
မှန်တယ် မလား။ :))
Happy Birthday... ညီမလေးအင်ကြင်း... ဘောပွဲလဲ နိုင်ပါစေ...း)
ဘဝမှာ အခက်အခဲများနဲ့လည်း ကြာမြင့်စွာ မကြုံတွေ့ဘဲ အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိင်ပါစေ။
ကမ္ဘာ့ဖလား ကာလမှာ မွေးနေ့ ကျရောက်တာ ဆိုတော့ နောက်တကြိမ် မွေးနေ့ရောက်ဖို့ ၄ နှစ်တောင် ထပ်စောင့်ရမယ်နဲ့ တူတယ်လို့ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ တွေးမိသေးတယ်။
အီတလီတော့ မသိသေးဘူး အင်္ဂလန်ကတော့ ဒုက္ခပေးလွန်းတယ်။ မနက်စာလေး ပါသွားလို့ မွေးနေ့ကိတ်မုန့်ကို တဝက်ခွဲပြီး ပြန်သယ်သွားပါတယ်း)
ဂျင်းရေ....နောက်ကျသွားတယ်နော် အမ ဘလော့ဂ်မှာ ပိုစ့်က တက်မလာသေးဘူး၊ သူများဘလော့ဂ်သွားရင်းနဲ့ တွေ့လို့ ခုမှရောက်တာ၊ အရုပ်လှလှလေး ဝယ်ထားသေးတယ်၊ မောင်တီတို့ ဝိရီယ တယ်ကောင်း...၊ ညီမလေးဂျင်း လိုအင်ဆန္ဒများ အားလုံးပြည့်ဝ၍ မိဘကျေးဇူးဆပ်သော၊ သာသနာအကျိုး ယခုထက်မက ထမ်းဆောင်နိူင်သောသူ ဖြစ်ပါစေ....။
မွေးနေ့မှ နောင်လာမယ့် နှစ်တွေတိုင်းမှာ
မတည့်တာမှ ကြိုက်တက်တဲ့ ဂျင်း..
အငိုသန်တဲ့ ဂျင်းက ..
မွေးနေ့ကို ခုမှ သိရတယ်..
ကော်မန့် အရင်ရေးပြီးမှ စာဖတ်တယ်၊
ဪ ဆိုးလိုက်တဲ့ကလေး...တွေ့လို့က တင်ပါးပုပ်သွားအောင် ရိုက်အုံးမှ:P
ဝယ်ထားတဲ့ အရုပ်လည်း ပေးဖို့ စဉ်းစားအုံးမယ်။ ကြိမ်လုံးတချောင်းပဲ လက်ဆောင်ပေးရ ကောင်းမလား?
မမအင်ကြင်း ယခုကျရောက်သော ဘယ်လောက်မှန်း မသိတဲ့မွေးနေ့ကနေ နောင် နှစ်ပေါင်း တစ်သောင်းထိ ကျန်းကျန်းမာမာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိုင်ပါစေခင်ဗျား..
ငယ်ငယ်တုန်းက သမီး ဂျီဂျင်းလေးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ နောင်လာမဲ့ အနာဂတ်မှာ သမီးလိမ်မာလေးကိုမွေးနိုင်ပါစေ.. ခစ်..ခစ်.. :P
ပျော်စရာ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ အင်ကြင်း..
ယခုမှစ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အသက်ရှည်
အဆင်းလှခြင်း ..ဥာဏ်ပညာကြီးခြင်း ..
မိုးနဲ့အတူ ရောက်လာတဲ့ သူလေး
ဂျီမကျနဲ့နော် ဂျီတော့တောင် မနဲဝင်နေရတာ ကိုးနတ်ရှင်ကြီးက တောင်ပြုံးပွဲစတော့မှာမို့ မအားသေးဘူး ပူဇော်ပသချင်ရင်လည်း နောက်မှ ပူဇော် ပေးချင်းတာလည်း နောက်မှဘဲပေးတဲ့
တော်ကြာ ဒီထက်ပိုပြီးကိုင်လိုက်မှဖြင့် တခါတလေ တောင် လည်မရဘူးဖြစ်သွားမယ်
နောက်ကျရင်ပေးမယ် အတိုးနဲ့မှတ်ထား တနေ့နေ့ပေါ့ ပြောမရရင် ၀ါးခြမ်းပြား နဲ့ ကြက်မွေး ကြိုက်တာရွေး
ဂျီမကျနဲ့ ဂျီတော့တောင် မနည်းဝင်နေရတယ်
ကိုးနတ်ရှင်ကြီးက ပွဲပြီးမှကောင်းတော့မယ်နဲ့တူတယ် (တောင်ပြုံးပွဲတော်ကို ပြောခြင်းဖြစ်) မတော်တရော်မတွေးရ။
ဂျီးဂျင်း ဂျီတော်တော်မကြပါနဲ့ ဂျီကြရင် ဂျီးတော်စည်းစိမ် ဂျိုပေးပြီး ပြန်ပြီ။
ဂျီဂျင်းလေး စိတ်မဆိုးကြေး ချစ်လို့ကြည်စယ်ပါတယ်
မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို အကောင်းဆုံး စာအုပ်ရိုက်တင်ပေးပါ့မယ်။
မိဘ ကျေးဇူး သိတတ် နားလည်တဲ့ သူ တတ်နိုင်သမျှ ပြန်ပြီး ကျေးဇူးဆပ် နေတဲ့သူ အတွက် ဆုတောင်းပေးတာ တွေထက် ကောင်းတဲ့ အရာတွေ ခံစားရမှာ သေချာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ၀ိုင်းဆုတောင်းပေး တာတွေထက် တန်ဖိုးရှိတာ တွေ အင်ကြင်း ဆီ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာမှာပါ။
(ကျွန်တော်က နောက်ကျနေလို့ မွေးနေ့ ကိတ်က ကုန်သွားပြီ :) )
ကဲပါ ဂျီဂျင်းရေးးးးးးးး ပိုစ့်ဖတ်နောက်ကျပေမဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းတော့တစ်လကြိုဆုတောင်းထားတာနော် အဲဒီလွဲတတ်တဲ့ မိုးကလည်း ဂျီကျတတ်တဲ့ဂျင်းဂျင်းကို ဒီလိုဆုပြန်တောင်းပေးမယ် နော် အဟင့်
သမီးလိမ္မာလေးအဖြစ်မိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်သလို ဂျင်းဂျင်းလည်းသာယာချမ်းမြေ့ပြီး လှပတဲ့ဘဝဖော်မွန်နဲ့လှပပြီးလိမ္မာတဲ့သားသားမီးမီးတွေ ပိုင်နိုင်ပါစေတော် သူငယ်ချင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဆုတောင်းပေးလို့ စိတ်ဆိုးဖူးမှတ်လား အယ် ပြုံးနေပြီဟုတ် ဟီးဟီး ခင်လို့ နော် အဲဒီလို ဆုတောင်းပေးတာ...
စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး လိုအပ်သောဆန္ဒတွေ
Too bad, all I see are squares! Anyway, haveavery Happy Birthday my friend. I wish you all the best in life! You owe us lunch here in the branch office LOL!
ကြည့်စမ်း ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကလေးမပဲ ...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြီးလာတော့ မိဘအပေါ် နွဲ့ဆိုး ဆိုးခဲ့သူတွေအများကြီးပါ....။ ဒီလိုပဲ သူ့ဟာနဲ့သူ သိတတ်သွားကြတာပါပဲ...။ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး နောက်ကျသွားတယ်...။
Happy Belated Birthday နော် အင်ကြင်..။
(နောက်ကျမှ လာဆုတောင်းပေးရလို့... မြန်မာ့အလင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြေးမုံကပဲဖြစ်ဖြစ်.....အကိုဂျီးအဖြစ်က......စွန့်လွှတ်ဖို့ ကြေငြာမယ်ဆိုရင်တော့...တားပါရစေကွဲ့.....း))
happy မွေးနေ့ ပါ ...
တားတား အိုးခွက်ပန်းကန် လာမွှေတွားဒယ် Birthday ကိတ် ကျန်သေးလားလို့ပါး)
မွေးရက်နေ့မှ စ၍ သက်ဆုံးတိုင် အရာရာမှာ အောင်မြင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ။
ဟက်ပီးးးး ချစ်မလေး မွေးနေ့ပါ...
မွေးနေ့မှ ဘဝတစ်လျှောက်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ... သတိရပါတယ်...နော်။ FB ပေါ်ပဲရောက်နိုင်တယ်... မွေးနေ့ မွလည်း ပေးခဲ့တယ်နော်.... ဘွားးးးးးးးဇ်
Happy Birthday ပါ အင်ကြင်းရေ..။ နောင်နှစ်များစွာကိုလည်း ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ပါစေ။
နောက်ကျပြီးမှ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဒီနေ့တော့ သေချာပြင်ဆင်ပြီးမှ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်။
နောက်ကျပြီးလာတဲ့ နောက်တစ်ယောက်ပါ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ၊ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ။
၀င်လည်ရင်းနဲ့ မွေးနေ့ နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလို့ 
ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်အမရေ မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကို
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာ နဲ့ သက္ကရာဇ်များစွာ
ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေဗျာ . . . :)
ပျောက်ချက်သား ကောင်းလှတယ် တန်တော့ ညီမလေး ဘောပွဲကိုက်နေပြီလား ဦးလေးတွမ် တင်ပေးထားတယ် မဖတ်ဘူးလား
ဘောလုံးပွဲထဲ အာရုံရောက်နေတာနဲ့ပဲ ဘလော့ကို လုံးဝလှည့်မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့မွေးနေ့လေးအတွက် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးသွားတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကို အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်မိ ၀မ်းလည်းသာမိပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ.....